Maxkamadda Ciidamada dalka Ugaandha oo digniin culus u dirtay ciidamadooda ka hawlgala Soomaaliya. – Madal Furan
Hoy > Warka > Maxkamadda Ciidamada dalka Ugaandha oo digniin culus u dirtay ciidamadooda ka hawlgala Soomaaliya.
Maxkamadda Ciidamada dalka Ugaandha oo digniin culus u dirtay ciidamadooda ka hawlgala Soomaaliya.
Muqdisho (Madal Furan) – Ka dib Markii Maalmihii lasoo dhaafay Maxkamad ku taalla Magaalada Kampala ay kasoo hormuuqdeen xubno ka tirsan Ciidankii dowladda Uganda ee ka howlgali jiray Soomaaliya,kuwaasooo loo heystay in falal ka baxsan howlgalka oo ay ka geysteen Soomaaliya.
Afhayeenka Ciidanka dowladda Uganda ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Maxkamada Ciidanka ay uga digtay Ciidanka dowladda Uganda ee ku sugan Soomaaliya qabashadda Arrimo ka madax banaan howlgalka ay ka waddaan Soomaaliya.
Afhayeenka Ciidanka Uganda , Brig Richard Karemire ayaa sidoo kale xusay in tilaabo laga qaadi doono Askarta Ciidanka dowladda Uganda ee Soomaaliya ka geysta Xadgudubyadda ka dhanka ah Xuquuqda Aadanaha, Ama hareermarsan Hanaanka Nabadgaliyadda Soomaaliya.
Wuxuu kaga digay in ay iibsadaan shidaalka iyo cunada loogu talla-galay xoogaga Amisom, si aanay hadhow u wejihin Maxkamad, oo ciqaab adag ku ridi karta.
Saraakiil iyo ciidan ka tirsan Uganda, ayaa billihii ugu dambeeyay ka soo muuqday Maxkamad ku taala Magaalada Kampala, markii lagu soo eedeeyay in musuq maasuq ka gaysteen dalka Soomaaliya.
15 Arday oo dalka Hindiya ugu dhintay dab ka kacay goob Kuleejo ah
Yuhuuda iyo Shiinaha oo laalaash bixin ugu tartama inay ku helaan mashaariicda dalka Kenya.
Musharixiinta Doorashada Koofur Galbeed oo bilaabay inay jeediyaan khudbadihii waxqabadkooda.